विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ करोड नजिक, कुन देशमा कति ?
काठमाडौं : विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ३ करोड ९६ लाख ३३ हजार पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ लाख ५० हजार भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थप भएका छन् । यस्तै, मृत्यु हुनेको संख्या पनि ११ लाख ९ हजार ८३३ पुगेको छ । हालसम्म २ करोड ९६ लाख ७८ हजार भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ८२ लाख ८८ हजार ७७८ पुगेको छ । यहाँ हालसम्म २ लाख २३ हजार ६४४ हजार जनाको मृत्यु भएको छ ।
भारतमा हालसम्म ७४ लाख ३२ हजार ६८० संक्रमित हुँदा १ लाख १३ हजार ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । ब्राजिलमा हालसम्म ५२ लाख १ हजार ५७० जना संक्रमित हुँदा १ लाख ५३ हजार २२९ जनाको मृत्यु भएको छ । रुसमा १३ लाख ८४ हजार २३५ संक्रमित हुँदा २४ हजार २ जनाको मृत्यु भएको छ । स्पेनमा संक्रमितको संख्या ९ लाख ८२ हजार ७२३ पुगेको छ भने ३३ हजार ७७५ जनाको मृत्यु भएको छ । अर्जेन्टिनामा ९ लाख ६५ हजार ६०९ संक्रमित हुँदा २५ हजार ७२३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोलम्बियामा ९ लाख ४५ हजार ३५४ संक्रमित हुँदा २८ हजार ६१६ जनाको मृत्य भएको छ । पेरुमा ८ लाख ६२ हजार ४१७ जना संक्रमित हुँदा ३३ हजार ६४८ जनाको मृत्यु भएको छ । मेक्सिकोमा ८ लाख ४१ हजार ६६१ जना संक्रमित हुँदा ८५ हजार ७०५ को मृत्यु भएको छ । फ्रान्समा ८ लाख ३४ हजार ७७० संक्रमित हुँदा ३३ हजार ३०३ जनाको मृत्यु भएको छ । साउथ अफ्रिकामा ७ लाख २०३ जना संक्रमित हुँदा १८ हजार ३७० जनाको मृत्यु भएको छ । यता, बेलायतमा हालसम्म ६ लाख ८९ हजार २५७ जना संक्रमित रहेका छन् ४३ हजार ४२९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
इरानमा ५ लाख २२ हजार ३८७ जना संक्रमित हँदा २९ हजार ८७० जनाको मृत्यु भएको छ । चिलीमा ४ लाख ८८ हजार १९० जना संक्रमित हुँदा १३ हजार ५२९ को मृत्यु भएको छ । बंगलादेशमा हालसम्म ३ लाख ८६ हजार ८६ जना संक्रमित हुँदा ५ हजार ६२३ को मृत्यु भएको छ । इटलीमा ३ लाख ९१ हजार ६११ जना संक्रमित हुँदा ३६ हजार ४२७ जनाको मृत्यु भएको छ । जर्मनीमा ३ लाख ५६ हजार ७९२ जना संक्रमित हुँदा ९ हजार ८३६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
साउदी अरबमा ३ लाख ४१ हजार ४९५ हजार संक्रमित हुँदा ५ हजार १४४ जनाको मृत्यु भएको छ । पाकिस्तानमा ३ लाख २२ हजार ४५२ संक्रमित हुँदा ६ हजार ६३८ जनाको ज्यान गएको छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म १ लाख २६ हजार १३७ जना संक्रमति फेला पर्दा ८८ हजार ४० जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । ७१५ जनाको भने मृत्यु भएको छ ।
जापानमा ९१ हजार ४३१ जना संक्रमित हुँदा १ हजार ६५० जनाको ज्यान गएको छ । यता, कोरोना संक्रमणको सुरुवात भएको चीनमा पछिल्लो २४ घण्टामा १३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । त्यहाँ हालसम्म ८५ हजार ६५९ जना संक्रमित हुँदा मृतकको संख्या ४ हजार ६३४ छ ।
फ्रान्सको राजधानी पेरिस छाड्नेको लर्को, ७ सय किलोमिटर लामो ट्राफिक जाम
भारतमा कोरोना संक्रमित ८० लाख नाघे, १ लाख २० हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो
ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजनाको कति छ न्याभ ?
अपि पावरको ४७% हकप्रद सेयर बिक्री खुला
स्टान्डर्ड चार्टर्डको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?